Kulan gaar ah oo Muqdisho uga socda MD. Farmaajo iyo Axmed Karaash | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Aug 8, 2020 - 29 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Kulan gaar ah ayaa uga socda Aqalka Madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabudllaahi Farmaajo iyo Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo 5 kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee laga soo doorto gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Kulanka cashada ah oo ay wada leeyihiin Madaxweyne Farmaajo, Madaxweyne kuxigeenka Puntland iyo xildhibaanada baarlamaanka ayaa looga hadlayaa xaaladdaha siyaasadeed ee dalka.
Madaxwayne ku xigeenka Puntland ayaa dhowaan kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Turkiga.
Madaxwaynaha Puntland siciid cabdullaahi deni ayaa khilaaf aan dhamaan tan iyo markii la doortay uu kala dhexeeyaa Dawladda dhexe, waxaa sidoo kale jiray khilaaf soo kala dhexgalay Gudoomiyahii Baarlamaanka puntland Dhoobadaareed iyo Madaxwyane deni, iyadoo ugu dambayn dagaal dhiig ku daatay kadib xilka laga qaaday Dhoobadaareed.
Sidoo kale waxaa dhowaan Xal laga gaadhay Khilaaf soo kala dhexgalay Madaxwayne deni iyo Madaxwayne ku xigeenka Axmed karaash, waxaana Suurto gal ah inuu khilaafkaasi dib usoo laba kacleeyo kadib kulankan ka dhacay Madaxtooyadda Soomaaliya.
Oo muxuu ka soo dooney Xamar, ma meentii Farmaajo ayuu run moodey. Mise wuxuu isku qaldey Jihooyinka Koofur iyo Waqooyi.
Governor Galeyr ayaan ka hayaa,war hooy Daarood iskuma hubnee HARKA HARGEYSA hanaga saarina.
* Naqraac iga dheh
Shiikh Cismaan Asuuli wuxuu dhahey Beenlow lagama dhigto hogaamiye.
Dabshid Qawmiyadda daarood oon is aqoon waad ku dhex wareeriyeen haddii aad tihiin IRIR. Ma kula tahay ln at isku reer yihiin FARMAAJO, DENI, AXMED KARASH IYO AXMED Madoobe????
Hadaba ha lagu ugu dhaarta in ay wada dhasheen raggaas.
IRIR waa yaabe xagee goorma ayaa dalka Soomaaliya uu yimi magacan irir? Dir gartay Hawiye na gartay Isaaq iyo Daarood na gartay Raxan weyn intaas oo isu tagtay bay ka kooban yihiin cid kasta oo raxanweyn wayn ahna si fiican baa loo yaqaan meeshay ka soo jeedo cidna ma dafiri karto mana diidi karto oo taariikh bay leeyihiin.
Haddaba Xusbigii loo bixiyey Irir ee uu bixiyey ina Ibrahim Cigaal ayaa nagu socday miyaa ? Irir xusbi buu ahaa sida USB ee qabiil maa’aha ee naga daaya sheeko caruureedka Isaaq marna leeyahay Dir baynu isku nahay marna irir. Irir qabiil kii u haystow wuxuu ahaa xisbi reer tolk ay Isaaq waa ogyahay asagaana sheekada wada, waana Daarood u hela bahaysi.
Oo dalka Puntland miyaa laga masaafuriyay?kkk Sidii Deni ugu amray inuu mushaharkiisa qaato kaan daba yuusin dib looma arag/maqline.kkk
Laydh aad shidato ma weydey, war ninyahow ya an lagaa garan jabka, shirka madaxda soomaali yacni
(madaxdii boqortooyada) miyaad ka xajiimootay Waa inay deni , axmed madoobe, cagjar, ducaale, m/ ku xigeenka galmudug, seyid aadan,bashe iyo c khalif shir isugu yimaadaan madaxtooyada looga hadlayo aayaha somaliya
Oafaygu Caafimaad ayuu Turiga ku joogey markii uu dhamaystay caafimaadkana Dayuuradii Turkiga ayuu sii raacay taa oo Muqdisho ku dajisey. Kulanka uu Farmaajo waa mid isaga ku kooban oo aanu ku matalin Puntland balse waa iska qaraaba salaan iyo salaanta oo uu la dhaafi waayey wiilka uu abtiga u yahay. U malayn maayo inuu tigidh u jaran doono film dhamaaday
Xaange; “Kulanka uu Farmaajo waa mid isaga ku kooban oo aanu ku matalin Puntland balse waa iska qaraaba salan” OO adigu yaad u hadlaysa? Kaasaa lagu leeyahay WAA AQOONYAHAN, Aqoonay Yaxaas ku qaad. WBT
Farmaajo miyaa u aqoonsaday Madaxweynaha xagiisa ka sharciyaysan,metelana maamulka?
Deni wuxu saxiixi waayay suulka Saar Karaashow,kharashkana IGA qabo…..
Cakuye waalida Somslida,waliba reer Mudugga.
Wiil yaroo qabyaalad iyo reer Mudugnimo isugu tagtay ayaa leh Axmed Karaash ma matalo Puntland kkk haddaa adigaa matala?
Waxa noocaas ayaa lagu leeyahay waa nidaam federal ankee federalka malahan ixtiraamkii dad wax isku darsaday.
FG:Dastuurku inuu qabo ankee magaaladdii lagu heshiin waayo in Xamar ay hoos tagayso ama dadkeedu San ku qancayn Xamar ay hoos tagto,sidaa daraadeed gobolkii ay ka baxdo waa naaqus maamul goboleedkii at 2 degmo oo 2 gobol ka kala tirsanna ma buuxin nidaanka federalka.
Waa dadtuuri,sidoo kale ku xigeen wasiir MP kuma imaadaan sooryo iyo qaraabanimo.
Shirkani wuxuu daba socdaa shirkii ERGO DAROD
ee ka dhacay dhulmareeb sida aan xogta ku helay
Waxaa laga hadlay Qodobo ay ka Mid tahay in la
aqoon sado mamulka KHAATUMO madaxwayne
Farmaajo wuxuu balan qaaday inuu dhaqaajiyo
SSC waxaa kaloo fursad wayn keenay khilaafka
hargaysa iyo abiya ahmed war saldhigii masarida
Wuxuu fursad siiyey buuhodle
-MADAXWEYNAHA KOOFUR GALBEED.
***MALAHA M/WEYNE FARMAAJO wuu ka helaa Jaahwareeka!!! BALSE wuxuusan weli garan Caqabadda ay ku yihiin xukunkiisa. ≈©≈BAL Jaallow ka warran Hadduu Farmaajo SOO saaro Degreto uu ku leeyahay; “Maalintaa ka dib WAA IN Madaxda Maamul Goboleedyada loogu yeero Guddomiye” Ma cidbaa ka daba Yabqi lahayd?. ≈©≈NINKII yaabay, wuxuu yiri; “MA ANAA WAALAN MISE CADAN BAA LAGA HEESA”. WBT
Ma saasbaa waxaan moodey,
Marti Ku soo hoyatey Marti kale.
Dhul iyo dhaqaale reer Qurac wuxuu ku soo aruurey Garowe.
Agoontiina iyo Naqraaciina naga celiya,
Shaxaad joogtaa, Qabyaalad joogtaa.
– Wixii magaca Seedigeen soo raaco waan u dulqaadaneynaa, lkn Reer Qurac HAL SHAQAL AYEY FAHMAAN.
BAHA DARAAWIISH SIAYAASAD IDIIN GAARA OO MIDAYSAN BAAD U BAAHAN TIHIIN SIDA OGAADEEN IYO MAREEXAAN HADII KALE WAA IDIIN GUUL DARO JOOGTO AH, WAAYO REERKAAS MAJEERTEEN REER AY TALADOODA WAX KU YEESHEEN OON JABIN LAMA ARAG, BIYAHA GEESKA WAA QASAN YIHIIN, WAA WAQTI XISAABAAD BADAN LAGU LAABANAYO, SHEEKADII MELES, INA YUUSUF YEY IYO SOMALILAYN EE DHULKIINA LOOGU GACAN GASHAY ISAAQ OGAADEENA LAGU KALA IIBSADAY WAA DHAMAATAY
Daanyeerka sheegtay Somali galbeed, AFKAAGA ka bixi AUNTE Mudane C/LLAAHI Yusuf!!! wuxuu ahaa ma gara kartide, Ma waxaad mooday mid Qabyaaladi dubatay sida Xaange? MAYA, wuxuu ahaa Waddani XALAALA. ≈©≈Waxaan kugula talin, Ruuxa shaqsi ahaan u fiiri ee Qabiil ahaan ha u fiirin. WBT
odagan ma caafimadka ayaa dhibay mase wuxu jecleystay jidkii ey ku jabeen camey dhoobo daarood waar yaa ku yira joog hajebine dhoobo daarood baa ku jabay jidkaan oo camey maa ku jabay waxan kabaqaya bisha danbe isago muuse biixi la fadhiya inaan arko
WAR yaa Garasho fiyow hayya oon ka amaahannaa?. ≈©≈Somalidu waxay ku Mahmaahda; “WARIMAYSIDE WAR HAKAA HARO”. ≈©≈Inkastoo Beesha Dhulbahante uusan cadaw dibadda uga imaanayn, oo ay ku filanyahay cadaawadda dhexdeeda, MA AHA in Xaqoodi la duudsiyo. ≈©≈Haddaba waxaan leeyahay Waa inay Dawladda Somali u ogolaato Maamul Goboleed Aan hostegin Jabhadaha SSDF iyo SNM. WBT
War ninkaanu yuu yahay.
Waa nin talo fiican.
Subxaanaka yaa cadiim,waxan ka yaabay jaahilnimada somalida waxay joogan halkay dunidu joogtay 200 sano ka hor casri jaahiligii bal maxay rabaan somalidu dadka halkan comment ku soo qora markaad akhrido waxad markaana ku soo baxaaya in anay somalidu fahansanaynba macnaha dowladi leedahay waxay jeclaan lahayeen inay sida xoolaha duurka isku cuna isku cunaan oo qabiilba qabiilka uu ka xoog roonyahay cuno,an idin macneeye dowladu waa nabad waa amni waa sharaf waa horusocod, hadii qabiil iyo dagaal heer lagu gaadhayo somaliyey 30 sano ood is cunayseen dayaxad gaadhi lahaydeen ee ilaahay iimanka ha idin soo celiyo
Dabshid, Xaange, Cadaado, Garqaad, Laalays iyo Akhyaarti kaleba ee aan Barxadda ku xagxaga jiray, Waxaan idin weydiisana cafis. ≈©≈WAXAAN dhageystay Muxaadaro Sheekh M/med Cabdi Umal uu uga hadlay asluubta wanaagsan Marka waxaan Ogaaday Qaldaadki aan ku jiray. ≈©≈Akhyaarey habki-siiqadi unbaan bedele Muranku waa halkiisi. WBT
Haduu muslimay, bal cimriguu ku muslimay eega
Halaga tashado sidi Alshabaab laysaga xorayn lahaa qorigi cada e xabadu
Kujirtay halo adeegsado iyaga bal dad aan iska dulqaadi karin cadow xansuuq iyo
Bara kac kuhaya hadana faanaya in umad lahogaamiyo waa hibo ilaahay bixiyo
Khasab maaha WBT
Ahmed Somali, daanyeer ayaad tahay. Kuma aanan cafin, sababtoo ah ogaan Ayaad wax walba u sameeyneeysay. Dhimo oo cadaabta gal. Oday Daarood ah oo Xawaadle ugu shaqeeyay qabiilkiisa ayaad tahay. Daanyeer
Ninku waa Nin Majeerten ah, waa ninkii Shir loo DHANYAHEY ka dhahey
HADALKII FIQI WAA SAX ee ahaa 91 meeshuu adeerkaa marey ayaad mari haddaad Kororsi noo keento.
Waliba ninkaanu wuxuu aaminsanyahey in SCHOOL LAGU DHIGO, wixii keenay dagaalkii Qaxa iyo Burburka ee 91
Reer Qurac Kursiga kakac mayaqaaniin ee Kursiga Hoo ayey yaqaaniin. EXILE ayey ku wadadanbeyn.
Waliba Shiikh kale hadduu ka dhageysan lahaa wuxuu dhihilahaa Waa reer Hebel
Meesha Figrado ayaa la isku dhaafsadaa
ADNA FIGRAD DABO-GAL (yacni HANGASH) ayaad la joogtaa,
Figradaada keenso haddii kale iska wado HANGASHTII aad ku dhago dhageyn jirtey
Guri Hebel CAAWA waxaa laga dhageystey BBC
Guri Hebel GABEYGII DHOODAAN ayaa ka shidnaa
Garage Xaaji Jirde Xusseen, Wiil Isaaq ah ayaa ku shaahayey
YACNI FACEBOOK IN 1988
@Garqaad abti ninkani waa lagu yaqaan waa nin MJ 4 sanno liinta u soo cabay musuqmaasuq 1980.
Waa iska fadhi ku dirir waxba ma sheegin.
Maantoo kale waa maalinta ay Somalida dhahdo masaa God iigu jiree garweynta ii keen.
@Axmed Somali,marba hadaad u bareerto cafis lama weydiisto.
Meeshaan masaajid ma ahan,waa la is caynayaa.
Ninku wuxuu naga ka shifey PLAN B
( ayaa Majeerten sir ku qarsan jirey).
Hadduu Farmaajo isku dayo inuu Kursiga Kororsi ama Musuq maasuq cod ku sii fadhiyo
Qof uu xukumayo ma JIDHO, Kadib Xoogaagiisa haku cuno Deyniile ( sorry Turkey)
Thuma walaahi inuusan 4 sano kale sii wadeyn mashruuca JAQ OO JIIF.
Hadaan qalad jirin. Saxna ma jirteen.
Anigu wax gooniya oon dhibsaday oon ka fekero iguma aadan dhibin.
Inta kalana kaftan ayaan u aqaan aniguba faatoxo aqrimeheyn.
Ka garqaad ahaan. Cafis.